မန်ယူအင်္ကျီဝတ်ထားတဲ့ Willian နဲ့ Alderweireld ပုံတွေ လူမှုကွန်ရက်မှာ ပျံ့နှံ့နေပြီ
မန်ယူအသင်းအင်္ကျီဝတ်ထားတဲ့ Willian နဲ့ Alderweireld ပုံတွေ လူမှုကွန်ရက်မှာ ပျံ့နှံ့နေပြီ
29 Jul 2018 . 9:26 PM
မန်ယူအသင်းက ခေါ်ယူဖို့ပစ်မှတ်ထားနေတဲ့ ချယ်လ်ဆီး တောင်ပံကစားသမား ၀ီလီယံ Willian နဲ့ စပါးနောက်ခံလူ အယ်လ်ဒါဝီယဲလ် Alderweireld တို့ မန်ယူအသင်းအင်္ကျီဝတ်ဆင်ထားတဲ့ပုံတွေ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာ ပျံ့နှံ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံတွေကို Manchester United Updates Facebook စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီမှာရေးထားတာကတော့”အယ်လ်ဒါဝီယဲလ်နဲ့ ၀ီလီယံတို့ မန်ယူအသင်းအင်္ကျီဝတ်ထားတဲ့ပုံတွေက အင်တာနက်မှာ ပျံ့နှံ့နေပါပြီ။
မန်ယူပရိသတ်တွေဆိုတာကလည်း အရင်နှစ်တွေတုန်းက Photoshop နဲ့ ဒီလိုပုံတွေ ဖန်တီးတဲ့အကျင့်တွေလည်းရှိတယ်။ ဒီပုံတွေကလည်း ဟုတ်၊ မဟုတ်ဆိုတာကတော့ အတိအကျ မသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလိုပုံတွေ တွေ့လိုက်ရတော့လည်း မန်ယူပရိသတ်တွေ ကျေနပ်စရာပေါ့။ ခင်ဗျားတို့ရော ဘယ်လိုထင်လဲ၊ ဒါတွေက အတုလား၊ အစစ်လားဆိုတာ”လို့ ဖော်ပြခဲ့တယ်။
၀ီလီယံကို ပေါင်(၆၆)သန်းနဲ့ ခေါ်ဖို့ မန်ယူနဲ့ချယ်လ်ဆီးတို့ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေကလည်း အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဗြိတိန်သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ စာမျက်နှာထက်မှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နေရာယူထားပါတယ်။ မန်ယူအသင်းနည်းပြမော်ရင်ဟို Mourinho ဟာ အသင်းရဲ့ခံစစ်အတွက် စပါးနောက်ခံလူ အယ်လ်ဒါဝီယဲလ်ကိုလည်း ပစ်မှတ်ထားနေပြီး အခုလောလောဆယ်တော့ အတိအကျ ဘာသတင်းမှ မထွက်သေးပါဘူး။
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာ ၀ီလီယံနဲ့အယ်လ်ဒါဝီယဲလ်တို့ရဲ့ ပုံတွေကို မန်ယူပရိသတ်တွေက အပြိုင်အဆိုင် Share နေကြပါပြီ။ ပရိသတ်တွေလည်း .. ဒီပုံတွေက အစစ်လား၊ အတုလားဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်ကြပါတော့ . . .
REF:Manchester United Updates
Photo:Manchester United Updates,Getty Images,Evening Standard
မနျယူအသငျးအင်ျကြီဝတျထားတဲ့ Willian နဲ့ Alderweireld ပုံတှေ လူမှုကှနျရကျမှာ ပြံ့နှံ့နပွေီ
မနျယူအသငျးက ချေါယူဖို့ပဈမှတျထားနတေဲ့ ခယျြလျဆီး တောငျပံကစားသမား ဝီလီယံ Willian နဲ့ စပါးနောကျခံလူ အယျလျဒါဝီယဲလျ Alderweireld တို့ မနျယူအသငျးအင်ျကြီဝတျဆငျထားတဲ့ပုံတှေ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာတှမှော ပြံ့နှံ့နပွေီဖွဈပါတယျ။ ဒီပုံတှကေို Manchester United Updates Facebook စာမကျြနှာမှာ ဖျောပွခဲ့တာဖွဈပွီး အဲဒီမှာရေးထားတာကတော့”အယျလျဒါဝီယဲလျနဲ့ ဝီလီယံတို့ မနျယူအသငျးအင်ျကြီဝတျထားတဲ့ပုံတှကေ အငျတာနကျမှာ ပြံ့နှံ့နပေါပွီ။
မနျယူပရိသတျတှဆေိုတာကလညျး အရငျနှဈတှတေုနျးက Photoshop နဲ့ ဒီလိုပုံတှေ ဖနျတီးတဲ့အကငျြ့တှလေညျးရှိတယျ။ ဒီပုံတှကေလညျး ဟုတျ၊ မဟုတျဆိုတာကတော့ အတိအကြ မသိနိုငျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဘာပဲဖွဈဖွဈ အခုလိုပုံတှေ တှလေို့ကျရတော့လညျး မနျယူပရိသတျတှေ ကနြေပျစရာပေါ့။ ခငျဗြားတို့ရော ဘယျလိုထငျလဲ၊ ဒါတှကေ အတုလား၊ အစဈလားဆိုတာ”လို့ ဖျောပွခဲ့တယျ။
ဝီလီယံကို ပေါငျ(၆၆)သနျးနဲ့ ချေါဖို့ မနျယူနဲ့ခယျြလျဆီးတို့ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပွီဆိုတဲ့သတငျးတှကေလညျး အခုရကျပိုငျးအတှငျး ဗွိတိနျသတငျးမီဒီယာတှရေဲ့ စာမကျြနှာထကျမှာ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့နရောယူထားပါတယျ။ မနျယူအသငျးနညျးပွမျောရငျဟို Mourinho ဟာ အသငျးရဲ့ခံစဈအတှကျ စပါးနောကျခံလူ အယျလျဒါဝီယဲလျကိုလညျး ပဈမှတျထားနပွေီး အခုလောလောဆယျတော့ အတိအကြ ဘာသတငျးမှ မထှကျသေးပါဘူး။
လကျရှိအခြိနျမှာတော့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာတှမှော ဝီလီယံနဲ့အယျလျဒါဝီယဲလျတို့ရဲ့ ပုံတှကေို မနျယူပရိသတျတှကေ အပွိုငျအဆိုငျ Share နကွေပါပွီ။ ပရိသတျတှလေညျး .. ဒီပုံတှကေ အစဈလား၊ အတုလားဆိုတာ ကိုယျတိုငျပဲဆုံးဖွတျကွပါတော့ . . .